Voyacoin စျေး - အွန်လိုင်း VOYA ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Voyacoin (VOYA)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Voyacoin (VOYA) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Voyacoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Voyacoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Voyacoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
VoyacoinVOYA သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.251VoyacoinVOYA သို့ ယူရိုEUR€0.212VoyacoinVOYA သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.192VoyacoinVOYA သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.228VoyacoinVOYA သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.24VoyacoinVOYA သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.58VoyacoinVOYA သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč5.54VoyacoinVOYA သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.933VoyacoinVOYA သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.334VoyacoinVOYA သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.35VoyacoinVOYA သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$5.53VoyacoinVOYA သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.95VoyacoinVOYA သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.36VoyacoinVOYA သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹18.82VoyacoinVOYA သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.42.44VoyacoinVOYA သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.345VoyacoinVOYA သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.384VoyacoinVOYA သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿7.82VoyacoinVOYA သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.75VoyacoinVOYA သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥26.79VoyacoinVOYA သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩298.4VoyacoinVOYA သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦97.09VoyacoinVOYA သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽18.31VoyacoinVOYA သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴6.87
VoyacoinVOYA သို့ BitcoinBTC0.00002 VoyacoinVOYA သို့ EthereumETH0.000655 VoyacoinVOYA သို့ LitecoinLTC0.00462 VoyacoinVOYA သို့ DigitalCashDASH0.00277 VoyacoinVOYA သို့ MoneroXMR0.00282 VoyacoinVOYA သို့ NxtNXT19.61 VoyacoinVOYA သို့ Ethereum ClassicETC0.0371 VoyacoinVOYA သို့ DogecoinDOGE72.55 VoyacoinVOYA သို့ ZCashZEC0.00305 VoyacoinVOYA သို့ BitsharesBTS7.75 VoyacoinVOYA သို့ DigiByteDGB8.04 VoyacoinVOYA သို့ RippleXRP0.893 VoyacoinVOYA သို့ BitcoinDarkBTCD0.00867 VoyacoinVOYA သို့ PeerCoinPPC0.834 VoyacoinVOYA သို့ CraigsCoinCRAIG114.56 VoyacoinVOYA သို့ BitstakeXBS10.72 VoyacoinVOYA သို့ PayCoinXPY4.39 VoyacoinVOYA သို့ ProsperCoinPRC31.55 VoyacoinVOYA သို့ YbCoinYBC0.000135 VoyacoinVOYA သို့ DarkKushDANK80.69 VoyacoinVOYA သို့ GiveCoinGIVE544.56 VoyacoinVOYA သို့ KoboCoinKOBO57.28 VoyacoinVOYA သို့ DarkTokenDT0.232 VoyacoinVOYA သို့ CETUS CoinCETI726.18
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sat, 15 Aug 2020 19:05:03 +0000.